Iran to assist Burmese Muslims – FOREIGN AND DEFENSE POLICY | democracy for burma
Iran to assist Burmese Muslims – FOREIGN AND DEFENSE POLICY
tags: Arakan, Benghali, Burma, FOREIGN AND DEFENSE POLICY, IKRC, Imam Khomeini Relief Committee, Iran, Myanmar, Organization of Islamic Cooperation, Rakhine State, so-called Rohingya
Michael Rubin | Operational Environment Watch
Iran used NGO’s to exploit and radicalized the displaced people in Lebanin and now they are trying in Burma.
– OIC Secretary-General Ekmeleddin İhsanoğlu isaclose friend to Turkey’s President Abdullah Gül.
အီရန်ရဲ့မြန်မာပြည်ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတာဟာအနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေတွေအတွက်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်စေပါတယ်၊ မြန်မာပြည်ကိုအန်ဂျီအိုအဖွဲ့အနေနဲ့ဝင်သွားတဲ့အထဲမှာ Imam Khomeini Relief Committee ( IKRC ) အဖွဲ့ပါသွားပါတယ်။ဒီ အဖွဲ့ဟာရိုးရိုးကြည့်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတာတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာကူညီနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုင်အာဂျီစီ (IRGC)လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှူတွေကြောင့်အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာအနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံလာရပါတယ်။၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ လက်ဘနွန်မှာရှိတဲ့အိုင်ကေအာစီ(IKRC)အဖွဲ့ခွဲဟာအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးငှါနရဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်။ ဟက်ဇဲဘိုလာတွေကိုကူညီထောက်ပန့်မှူပေးခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့မှူပေးနေတာရယ်၊ လတ်တလောဖြစ်ပေါခဲ့တဲ့အရေးအခင်းတွေ၊ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှူတွေရယ်ဆက်စပ်ပြီးလက်ဘနွန်မှာဒုက္ခသည်တွေကိုအကြမ်းဖက်လာအောင်သိမ်းသွင်းလုပ်လေ့ရှိတဲ့အီရန်ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့မှူပေးနေတာရယ်ကအလားသဏ္ဍန်တူနေပါတယ်။
Seldom do organizations such as the IKRC offer assistance and then leave. That Iran’s outreach to Burma’s Muslims coincides witharenewed American and, more broadly, Western diplomatic and commercial engagement there might also have security implications should Iranian authorities use charities they control to exploit and radicalize displaced persons as they have in Lebanon.
← ALERT!!!!! ABSDF KILLING FILES ORDER TO CLOSE BY NAING AUNG WIFE KHIN OHMAR NDDကABSDFရဲ့ မှတ်တမ်းများ(Archives)